Tattoo hooyada asalka ah iyo gabadha, fikrado badan | Tattoo
Antonio FDez | | Tattoos leh qaabab, Tattoos leh xarfo
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadka ku kallifa inay ku sawiraan jidhkooda ayaa ah jacaylka ay u hayaan xubin qoyska ka tirsan ama saaxiibkood. Tusaale cad ayaa ah Tattoo hooyada iyo gabar asalka ah
Qodobkaan waxaan si qoto dheer uga hadli doonaa noocan ah xaraashka, shaki la'aan waa mid ka mid ah sababaha ugu wanaagsan ee aan ku qasbeyno in aan maqaar ku durayno maqaarkayaga.
1 Sababaha loo sawiro naftayada sharafka waalidkeen
2 Fikradaha Tattoo ee loogu talagalay hooyooyinka iyo gabdhaha
2.1 Weedh badhkeed, ku habboon oo aad caan u ah
2.2 Naqshado aan dhammaystirnayn oo diyaar u ah in la dhammaystiro
2.3 Laba flamingos, calaamad u ah dheelitirka
2.4 Ubaxyo iswaafajinaya, naqshad qurux badan
2.5 Qorraxda iyo dayax madoobaadka suugaanta ugu badan
2.6 Shimbiraha ku duulaya xorriyadda
2.7 Saacadaha, maxaa yeelay waqtiga kuma dhaafo adiga
2.8 Sawirro waligeed kuu dhiman
2.9 Tattoo Unalome, noloshiisa oo hal saf ah
2.10 Astaamaha xayawaanka ee ku tusaalaynaya
2.11 Falaadho, marwalba horay u socda
2.12 Tattoos Origami, farshaxanka warqadda ee maqaarkaaga
3 Sawirrada Tattoo-ka loogu talagalay Hooyooyinka iyo Gabdhaha
Sababaha loo sawiro naftayada sharafka waalidkeen
Caadiyan waxa ugu caansan waa in lala kulmo hooyooyinka da'da yar ama aabbayaasha go'aansada in ay ku sharfaan gabdhahooda ama wiilashooda tatooyo. Tusaale ahaan, magacyada wiilka ama gabadha, taariikhda dhalashadooda ama xitaa sawir iyaga xusuusiya ayaa aad u badan.
Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, waxay noqoneysaa mid sii kordheysa moodada hooyada iyo gabadheeda waxay u wada baxaan istuudiyaha tatuuka si ay u wada sameystaan ​​tattoo wada jir ah. Taa baddalkeeda, astaantani kuma koobna oo keliya in lagu sharfo wiilka magacyo iyo taariikho, laakiin sidoo kale waxay u muuqdaan inay raadinayaan taabasho shaqsiyeed oo muujineysa sida ay hooyada iyo gabadha u dhow yihiin.
Fikradaha Tattoo ee loogu talagalay hooyooyinka iyo gabdhaha
Tani waa wax aad u wanaagsan, laakiin, Tattoo noocee ah ayaa loo sameeyaa hooyada iyo gabdhaha aan heli karno? Hagaag, runtu waxay tahay in xulashooyinku ay aad u kala duwan yihiin, sida nooc kasta oo kale oo tattoo ah, xadka kaliya waa fikradeena u gaarka ah (iyo tayada farshaxanka tattoo oo naga dhigi doonta tattoo).
Weedh badhkeed, ku habboon oo aad caan u ah
Mid ka mid ah naqshadaha ugu caansan ee noocan ah tattoo-ga ah ayaa ah in la helo weedh loo qaybiyay laba qaybood si markaa ay u dhammaystirmi karto oo keliya haddii hooyada iyo gabadhu wada joogaan. Raadi weedh idin xusuusinaysa, tusaale ahaan, hees, gabay ...
Naqshado aan dhammaystirnayn oo diyaar u ah in la dhammaystiro
Ikhtiyaar kale oo aad u xiiso badan ayaa ah in la doorto naqshad aan dhammaystirnayn, oo loo qaybiyay kalabar ama taas ayaa la dhammaystiray markii labada qof ay mar kale wada joogaan. Waa hab lagu xasuusto jacaylka aan u qabno hooyada ama gabadha oo had iyo jeer qofkaa gaarka ahi joogno xusuusteenna. Tattoo-yadaani waa kuwo aad u qurux badan maxaa yeelay waxay muujinayaan jacaylka hooyada.
Laba flamingos, calaamad u ah dheelitirka
Flamingos waa xayawaan qurux badan, oo leh codad casaan ah oo ay u muuqdaan kuwo aad u fiican, astaantooda ayaa aad ugu habboon tatooyga wadajirka ah ee u dhexeeya hooyada iyo gabadha. Flamenco waxay astaan ​​u tahay raaxada aan ka heli karno dadka kale, iyo sidoo kale taageero iyo isu dheelitirnaan. Raadi naqshad aad labadiinuba jeceshahay, waxaad dooran kartaa ul qalalan oo flamenco ah iyo xitaa xayawaanno kala nooc ah si ay u caddaato cidda ugu da'da weyn.
Ubaxyo iswaafajinaya, naqshad qurux badan
Cunsurka kale ee ciyaarta sii kordhin kara waa ubax. Waxaad dooran kartaa naqshad ubax leh oo macnahoodu la xiriiro dabeecadaada ama xitaa magacyadaada (Rosa, Jacinta, Narcisa ...). Haddii aad rabto inaad ka dhigto xitaa mid asal ah, dooro tattoo oo kaliya dhameystiraya marka labadiinnu halkaa joogaan, tusaale ahaan, oo ay la socoto garbaha ubaxa.
Qorraxda iyo dayax madoobaadka suugaanta ugu badan
Waxyaabaha is kaabaya, mid ka mid ah oo ka dhex shaqeeya hooyooyinka iyo gabdhaha waa dayaxa iyo qorraxda. Iyagu waa laba dhinac oo isla lacagta ah, maaddaama mid uu maamulo maalinta halka kan kalena uu maamulo habeenka, iyo in ay si layaab leh u shaqeeyaan, iyaga oo wata naqshado fudud ama kuwa kale oo leh taabasho dheeri ah.
Shimbiraha ku duulaya xorriyadda
Mawduuc qurux badan oo loogu talagalay hooyooyinkaas iyo gabdhahaa doonaya hooyooyinka iyo gabdhahooda asalka ah oo ay ku muujinayaan inay timaado waqti ay tahay inaan u oggolaanno gabadheenna inay duusho ... laakiin sii wad inaad na xusuusato. U tag naqshad aan dhammaystirnayn oo midi yahay qafis furan oo kan kalena yahay adhiga shimbiraha.
Saacadaha, maxaa yeelay waqtiga kuma dhaafo adiga
Waqtigu waa mid kale oo ka mid ah halyeeyada weyn ee tatooyada, sidaa darteed maaha wax aan caadi ahayn inay xitaa xiddig ka noqoto naqshadaha u dhexeeya hooyooyinka iyo gabdhaha. Waqtigu, ka dib, waa waxa kaliya ee aan nahay iyo waxa ay hooyooyinkeen na siiyaan markay dhashaan: waa nolol waqti leh oo aan ku korinno kuna noolaano nolol.
Sawirro waligeed kuu dhiman
Fikrad aad u qabow, oo aad hubaal ku aragtay maqaalada kale, ayaa ah inaad doorato naqshad ku tusi doonta adiga qaabab ka duwan oo aad loo jeclaan karo: sawir ka qaad markii aad yarayd oo waxaad yeelatay sawir. Waxa ugu caansan waa in la doorto sawirka gabadha, in kasta oo sawir ah sida hooyadu u qiyaastay qoyskeeda markay yarayd ay waliba iyadu tahay wax la yaab leh.
Tattoo Unalome, noloshiisa oo hal saf ah
Waxaan horey uga hadalnay ku filan taatikadaan xiisaha leh, ee khad shakhsi ahaaneed looga sameeyay khibradaha ugu muhiimsan nolosha qofka. Sida aad qiyaasi karto, Waa fikrad gaar ahaan qabow marka laga hadlayo sawirka tattoosyada hooyooyinka iyo gabdhaha, kaas oo si isku dhafan loogu dari karo.
Astaamaha xayawaanka ee ku tusaalaynaya
Kahor intaanan ka hadlin flamingos, laakiin waxaa jira xayawaano badan oo badan oo si weyn ugu eegi kara tattoo. Haddii aad rabto inaad muujiso dhinaca madrassa ee mid ka mid ah (oo leh libaaxyo iyo dhalaan, tusaale ahaan), qallafsanaanta labada (shabeel) ama si fudud jacaylka aad u qabto raha, Tattoo xayawaanku waa ikhtiyaar leh kumanaan fursadood.
Falaadho, marwalba horay u socda
Haddii, dhinaca kale, aad rabto naqshad aad iyo aad u fudud, waxaad dooran kartaa fallaaraha. Kuwani waxay noqon karaan kuwo dhaadheer ama gaagaaban, ama waxay leeyihiin astaan ​​isku dhafan (sida infinity), laakiin sikastoo ay ahaataba marwalba waxay leeyihiin macno la mid ah: marwalba waa inaad horey u socotaa, xitaa ka sii fiican haddii aad wada qabato!
Tattoos Origami, farshaxanka warqadda ee maqaarkaaga
Ugu dambeyntii, Tattoo 'origami' sidoo kale waa la dabooli karaa, gaar ahaan haddii aad rabto inaad doorato macne muujinaya in inkasta oo aad tahay dad kala duwan aad isku meel tihiin (markaa waxaad dooran kartaa doon iyo diyaarad warqad ah, tusaale ahaan) ama xusuusta carruurnimada oo fudud.
Sawirrada Tattoo-ka loogu talagalay Hooyooyinka iyo Gabdhaha
Sidaynu nidhaahno, ikhtiyaarka ugu habboon ayaa ah inaad doorato tattoo aan dhammaystirnayn inaad hooyadaa ama gabadhaada mooyee mooyee. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli kartid dhiirrigelintaada sawirka soo socda oo leh xitaa nashqado badan oo loogu talagalay hooyooyinka iyo gabdhaha oo ugu dambeyntii waad awoodi kartaa inaad tattoo ku sameysid shirkadda hooyadaa ama gabadhaada. Sikastaba xaalku ha ahaadee, tillaabo aad labadiinaba qaadi doontaan oo u adeegi doonta midaynta xiriirkiina xitaa inbadan. Xaqiiqdii kama qoomameyn doontid.
Tattoo hooyada asalka ah iyo gabadha ayaa aad u qurux badan isla markaana ah hab aad u qabow oo lagu muujiyo sida aad ugu dhowdahay, sax? Noo sheeg haddii aad wax leedahay, haddii aad jeceshahay naqshad gaar ah ama fikradaha aad u hayso naqshadeyntaada, waa inaad nooga tagtaa faallo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattoo hooyada asalka ah iyo gabadha, fikrado badan
Tattoo Virgin, dabeecad leh aamin badan